Banaanbax looga soo horjeedo Farmaajo oo Muqdisho ka bilaawday iyo…. - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta Banaanbax looga soo horjeedo Farmaajo oo Muqdisho ka bilaawday iyo….
Banaanbax looga soo horjeedo Farmaajo oo Muqdisho ka bilaawday iyo….
Waaldiintan oo isugu jira rag iyo Dumar ayaa waxaa Maanta ay banaanbax ka dhigeen Isgoyska km4 ee Magaalada muqdisho, iyaga oo dalbadanayay in Carruurtooda dib loogu soo celiyo.
Banaanbaxayaasha oo watay boorar ay ku qoran yihiin Erayo ay ku dalbadanaaan in Carruurtooda ay dowladda Soomaaliya dib ugu soo celiso, kuwaas oo ay sheegeen in ay maqleen inay ka qeyb galeen dagaalkii looga soo horjeeday Kooxda TPLF ee ka dhacay waqooyiga Itoobiya
Qaar kamid ah Waalidiinta banaanbaxa dhigayay oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxaa ay sheegeen in dowladda looga baahan yahay in Nolol ama Geeri ay ugu keenaan Carriirtooda oo muddo sanado ah arkin nala hadin.
Waalidiinta Maanta dibadabxa ka dhigay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli dhawaan Warbixin kasoo baxday Qaramada Midoobay lagu sheegay inay heleen cadeeymo muujinaya in dhalinyaro Soomaali ah ka qeyb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka Togreega e Itoobiya, kaas oo u dhaxeeyay Ciidamada Itoobiya & Jabhadda TPLF.
Previous articleDil layaab leh oo ka bilaawday Muqdisho & dhalinyaro la toogtay